Kenya oo beenisay in ciidankeeda ay Dil iyo Kufsi ka geystaan Waqooyi Bari | Baydhabo Online
Kenya oo beenisay in ciidankeeda ay Dil iyo Kufsi ka geystaan Waqooyi Bari
Dowladda Kenya ayaa beenisay in ciidamadeeda , kufsi iyo bililiqo ka geystaa Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, kadib markii dadka deegaanka ay sheegeen inay u dulqaadan waayeen tacadi ay kala kulmaan ciidamada Kenya.
Saraakiil u hadashay dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegeen in eedeyntan loo jeediyay ciidankooda ay tahay mid been abuur ah, sidoo kalena ciidanka Kenya aysan ka suurtoobin in ay ku kacaan arimahan oo kale.
Dadka Deegaanka ee Tuuladda Sheekh Barrow ee Deegaanka Lafey ayaa dhowaan waxa ay sheegeen in goobahooda ganacsiga boobeen ciiddankii Kenya ee loo xil saaray in ay ka hortagaan weerarkii ay Shabaab Jimcihii hore ku qaadeen Deegaanka Lafey.
Guddoomiyaha Deegaankaasi, Aadan Xasan Afeey ayaa u sheegay Warbaahinta inay ciiddanka toogteen Nin watay Mootadda nooca Kenya looga yaqaano Boda Boda, kaasi oo lagu magacaabi jirey Axmed Rooble.
Wuxuu sheegay ciidamada in ay sidoo kale dhaceen hanti ay leeyihiin dadka shacabka ah, sidoo kalena ay geysteen Kufsi ay kula dhaqaaqeen qaar ka tirsan Bulshada Deegaanka.
Al-shabaab ayaa weeraro waxa ay ka geystaan Gobolka Waqooyi Bari Kenya, halkaasi oo ay ku beegsadaan ciidamada dalka Kenya.